Ini ndinotenda B2B Yemagariro Media Kushambadzira Kubudirira kuri Kuwedzeredzwa | Martech Zone
China, Kurume 16, 2017 China, Kurume 23, 2017 Douglas Karr
Ngatitangei hurukuro iyi nekutaura kuti humbowo hwangu hwese ndehwechokwadi. Ini handina kumboita chero kutsvagurudza kwakapararira kuratidza hunhu hwangu; Ini ndinongoramba ndiine vanhu vazhinji vachizevezera kwandiri kuti havashandise vezvenhau kutyaira mhedzisiro. Uye havasi kutambura zvachose; makambani avo ari kuita zvikuru.
"Mira!", Iwe unoti, "Vanogona kunge vachiita zvirinani kwazvo!"
Kwete. Imwe yemakambani ine pamusoro pe100% kukura YoY mumusika unokwikwidza. Hapana kana mumwe wehutungamiriri hwavo kana vashandi vavo vanochengetedza hune hukama hwemagariro enhau. Ruzhinji rwevatungamiriri vavo vanouya kubva kumisangano iyo yavanopinda pasi rese. Ivo vane remukati rekutengesa timu iyo inoteedzera pane iwo anotungamira uye inotyaira kumba kutendeuka.
Rimwe bhizinesi rakangovaka nzvimbo nyowani yehofisi uye rinozvibhadharira mari yavo kukura. Vane chigadzirwa chekubatanidza chisina kukwikwidzana muindastiri indasitiri, uye vanosaina vatengi nekukurumidza sezvavanogona kuvaratidza demo. Zvakakomba - hapana vezvenhau.
Ini handisi kungotaura nezve kuongorora kweyevero… ndiri kutaura zero simba rakaiswa mumaitiro avo enhau.
Kune rimwe divi, ndine kambani imwe yandinoshanda nayo yakandiudza kuti hapana chavanoita kunze kwekukurudzira pasocial media nekuti inoshanda chaizvo. "Chii chimwe chawaedza?", Ndakabvunza. "Hapana, hatidi.", Akadaro muridzi. Inonakidza, saka iyo imwe kambani iri kuburitsa midhiya midhiya haina zvainoita asi vezvenhau. Vanoziva sei kuti iri kushanda?!
Mumwe wandaishanda naye nguva pfupi yadarika akandiudza kuti CMO yake yakamiswa basa mushure memwedzi yekumhan'ara zvisina maturo kubhodhi. Kutarisa peji, Kutevera, Kuda, uye Kudzokorora… pasina zvachose kuwirirana kune chero chikamu chemari kana kukura.
Isu tine mutengi uyo akapemberera kugona kwavo midhiya enhau, achiunganidza yakakura kwazvo inotevera mumasocial media mapuratifomu. Vakashanda zvisingaite zvakaoma kuti vabatanidze uye kusimudzira yavo yemagariro netiweki. Asi kana zvasvika kune mademo uye kurodha pasi, iwo manhamba haana kumbobvira awirirana.
Maonero angu anecdotal anoenderera mberi nemawebhusaiti angu. Ndichiri kuwana mamwe mabhanhire kuburikidza neLinkedIn, Facebook neTwitter zviri kugadzira zero mari. Ini munguva pfupi yapfuura ndakaedza uye ndakatyaira makumi ezviuru evaverengi vekuwedzera kuti vaite navo kuburikidza ne Facebook maneja Yep .. wakazvifungidzira. Haana kuenda.
Matambudziko mana neSocial Media Kushambadzira
Pane matambudziko mana anokuvadza kugona kwedu kuwana yakakura pasocial media-inonzi kutengesa:
Chinangwa - vateveri vako nevateveri pane vezvenhau vanokutevera nekuti ivo vari kutsvaga kwavo kwavanotevera kutenga uye kutarisa kambani yako? Fungidziro yangu ndeyekuti chikamu chidiki chevateereri vako vese ... uye unakirwe kuyedza kufunga kuti ndivanaani chaizvo.
Kupiwa - shanduko pakati pesocial network neyako analytics izere nemipengo, chikuru pane zvese kuve kutengesa kwakauya kubva kuTwitter kana Facebook Gadziriso. Hazvisi zvisingaiti; zvakangooma.
Funnels - mushambadzi wese anoda kudhirowa yako fanera yekutendeuka uye anokuudza kuti kubatanidzwa kwakakosha pakati pekuziva nekutendeuka. Dambudziko harisi iro rairo; ndiyo nzvimbo iri pakati. Vatengi vanofungidzira iyi funnel inotonhorera apo tarisiro dzinodarika danho rekupedzisira kune rinotevera. Ichokwadi chakasiyana kwazvo. Shanduko mamaira kure nekubatanidza pasocial media. Zvinogona kutora makore kutyaira chiremera kumba chauinacho chinofanira kuzivikanwa nezvacho. Iyo toni yekuedza ine shoma shoma kudzoka kune investment.
Hazvina maturo - hazvinzwe kushamisika here kana iwe ukawana mazana kana zviuru zvemaonero, kufarira, tweets, kudzokorora, kugovera kana kukwikwidza zvakapinda? Izvo zvinoita - timu yedu yakazviita uye yakakwira-five kune yedu yemagariro midhiya kugona. Dambudziko, hongu, raive rekuti hapana eaya metric akatungamira kune chero bhizinesi. Kana iyo foni isiri kurira, vatengesi vanofarira kunongedza zvisina maturo metrics kutsausa kutarisisa.
Vatengesi vanofanirwa kunge vachishanda kubva Mari kudzokera kumashure kune tarisiro. Kuziva iko kunobva mari yako kunofanirwa kuve kwako kwekutanga pekutanga uyezve kutyaira bhizinesi kuburikidza neaya masvikiro nemikana.
Handisi kuti vezvenhau havashande kana kuti hazvigone kushanda, ndiri kungoona kuti ini ndinowanzoona kushambadzira mari mune mamwe marongero ane yakanyanya kudzoka mukudyara, inoda kushoma kushanda, uye zviri nyore kuteedzera.
Iniwo handisi kurega pamasocial media. Ndinoziva kuti kuziva chiziviso, kuzivikanwa, chiremera, uye kuvimba zvese zvinogona kutyaira mibairo mikuru. Ndiri kungopokana izvo zvinokonzeresa pasocial media kazhinji zvinowedzeredzwa. Kana chero munhu akakuudza zvakasiyana, tarisa kunze uko bhizinesi uye ongorora kuti vanobhadharwa sei.
Kufungidzira kwangu ndekwekuti hazvisi kuburikidza nevezvenhau.
Tags: basafacebook adsLinkedInevanhu vezvenhaupasocial media kupiwaTwitter